HomeHoryaalka FranceManchester City oo qorsheyneysa inay baadigoobto saxiixa Neymar.
March 15, 2022 Horyaalka France, Suuqa kala iibsiga, Wararka Ciyaaraha 0
Manchester City ayaa lagu soo waramayaa inay isku dayi karto inay si lama filaan ah ula wareegto weeraryahanka Paris Saint-Germain Neymar xagaagan .
30-sano jirkaan ayaa xilli ciyaareedkii 2021-2022 ka soo gaaray dhaawac canqowga ah, waxaana ku ooriyay taageerayaashiisa ciyaartii Ligue 1 ee isbuucaan ay guusha ka gaareen Bordeaux, inkastoo uu shabaqa soo taabtay.
Neymar ayaa si joogta ah loola xiriirinayay inuu ku laabanayo Barcelona sannadkii hore, inkastoo u dhaqaaqistiisa uu ku guuldareystay, qandaraaskiisa Parc des Princes ma dhacayo ilaa dhamaadka xilli ciyaareedka 2024-25.
Si kastaba ha ahaatee, warbixin dhawaan soo baxday ayaa lagu sheegay in PSG ay aad u dooneysay inay iska fasaxdo Neymar xagaagan, Fichajes ayaana haatan sheegaysa in tababaraha Man City Pep Guardiola uu jeclaan lahaa inuu xiddiga reer Brazil keeno Etihad Stadium.
Warbixinta ayaa intaa ku dartay in Barcelona iyo Newcastle United ay ku xifaaltami karaan kooxda heysata horyaalka Premier League saxiixa Neymar, inkastoo uu ku qasban yahay inuu wax weyn ka bedelo mushaarkiisa si uu dib heshiis ugu saxiixo La Blaugrana.
Neymar ayaa loo diiwaan galiyay shan gool iyo shan caawin 20 kulan oo tartamada oo dhan ah xilli ciyaareedkan, taasoo ka dhigeysa wadarta guud ee gooldhalinta 92 gool iyo 57 caawin 136 kulan oo uu u saftay Les Parisiens.